စိတ်ကူးပျော်ရာ: October 2013
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/31/2013 07:50:00 AM No comments:
ပြီးရင် Software ရဲ့  ရှာဖွေမှုကို Start လုပ်လို့ရပါတယ်။ အချိန်တိုအတွင်း မိမိ ပျောက်ဆုံးသွား၊ သတိမထားပဲ ဖျက်မိသွားတဲ့ အချက်အလက်အားလုံးကို ပြန်လည်ဖော်ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Recuva လို့အမည်ရတဲ့ Recovery Software လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/31/2013 07:44:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/31/2013 07:27:00 AM No comments:
ဒူးရင်းသီးစားပြီး Coca-Cola မသောက်ပါနှင့်
အသက် ၂၈နှစ်အရွယ် တရုတ် Tourist တစ်ယောက် ဒူးရင်းသီးပေါ်ချိန်မှာ ဘန်ကောက်သို့ သွားလည်မိချိန်မှာ သူကဒူးရင်းသီးကလည်းကြိုက်တော့ အများကြီးစားမိပြီးတဲ့အချိန်မှာ Coca-Cola သောက် လိုက်သည့်အခါ
ဘန်ကောက်မှာတောင် ကြေငြာထားပါတယ်တဲ့ ဒူးရင်းသီး အတော်များများ စားပြီးရင် ၈ နာရီအတွင်း Cola နှင့် ဘီယာမသောက်ရဘူးဆိုတာကိုပါပဲ။
ကဲ သိပြီးသားသူတွေရော မသိသေးတဲ့ သူတွေရော ဖတ်ရူမှတ်သားထားကြပါနော်။
လူ့အသက်ကယ်ခဲ့တဲ့ HTC Evo 3D
HTC Evo 3D ဆိုတာ ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇွန်လက အမေရိကန်မှာ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ 3D စမတ်ဖုန်း ဖြစ်ပါတယ်။ 3D မျက်မှန်မလိုပဲ သုံးဖက်မြင့် ပုံရိပ်များ ကြည့်ရှု နိုင်ပြီး ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းကိုလည်း 3D အဖြစ် တင်နိုင်အောင် စွမ်းဆောင်ရည် ရှိပါတယ်။
အမေရိကန် ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ်မှာ သေနတ်ပစ်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်းလှည့်နေစဉ် မသင်္ကာတဲ့ လူရမ်းကား တစ်စုကို ရဲတို့ တားဆီးဖို့ ကြိုးစားရင်း ရန်သူဘက်က သေနတ်တစ်ချက် ပစ်ခက်ခဲ့ပါတယ်။ ယင်းသေနတ် ကျည်ဆံက ကင်းလှည့်ရဲ Lieutenant Allen ရဲ့  ရင်အုံဘယ် ဘက်ကို ထိမှန်ခဲ့ ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် Allen ရဲ့  ရင်အုံ ဘယ်ဘက်က အိပ်ကပ်ထဲမှာ ဖုန်းတစ်လုံးပါပါတယ်။
ယင်းဖုန်းက HTC Evo 3D ဖြစ်ပါတယ်။ ယင်းဖုန်းကို ထိမှန်ခဲ့လို့ ဖောင်း Screen ပေါက်ပြီး နောက်ဘက်က ကျောကိုတော့ မဖျောင်လိုက်ပါဘူး။ ဖုန်း အရှေ့ က ယခုပုံမှာ မြင်တွေ့ရသလို ဖြစ်သွားပြီး နောက် ဘက် ကတော့ ဖောင်းကြွ သွားရုံပါပဲ။ လူကတော့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာမရပဲ ရင်အုံ အနည်းငယ် နာကျင်မှုသာ ဖြစ်ခဲ့ကြောင်း သိရ ပါတယ်။
Processor : Snapdragon S3 chipset : dual core 1.2 GHz processor
Screen : 960×540-pixel 4.3-inch screen coated with Gorilla Glass, capable of autostereoscopy for the viewing of 3D content without the need for specialized glasses.
Cameras : two rear-facing 5-megapixel cameras, capable of capturing videos in 720p resolution in 3D or 2D. It can also take photos in stereographic 3D at 1080p resolution. It featuresasingle 1.3-megapixel front-facing camera.
Software : Android 2.3 and the HTC Sense 3.0 interface. An update was released to upgrade the phone to Android 4.0.3 with Sense 3.6; this update is pre-loaded on the Evo V 4G.
Storage :4 GB internal storage andapre-installed 8 GB microSDHC card. expandable to 64 GB.
Aung Kham ( K & N Mobile and Online Store )
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/31/2013 07:19:00 AM No comments:
ရှုံးနိမ့်မှုပေါင်း (၁ဝဝ၉) ကြိမ်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးနေဝင်ချိန်ကျမှ အောင်မြင်ခဲ့သူ
(၁၄) နှစ်သားအရွယ်ရောက်တော့ ကျောင်းတက်ဖို့လဲပိုက်ဆံမရှိ၊ မိဘအိမ်မှာလည်း မနေချင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့် လေလွင့်တဲ့ဘဝကို စတင်ရောက်ရှိခဲ့ရတယ်။
(၁၆) နှစ်သားအရွယ်မှာအသက်လိမ်ပြီးစစ်ထဲဝင်ခဲ့တယ်။ မကြာခဏ သင်္ဘောမူးတဲ့အတွက်ကြောင့် အိမ်ပြန်ပို့ခံရတယ်။
(၂ဝ) နှစ်အရွယ်မှာ မီးပြင်ဆရာ၊ ကူးတို့သမားလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် ရထားသံလမ်းဝန်ထမ်းလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ဘာအလုပ်မှ အဆင်ပြေတယ်ဆိုတာ မရှိခဲ့ဘူး။
(၃ဝ) နှစ်အရွယ်မှာ အာမခံကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ အရောင်းမြှင့်တင်သူလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ပိုင်းမှာ အပိုဆုကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူဌေးနဲ့ရန်ဖြစ် စကားများပြီး အလုပ်က နှုတ်ထွက်ခဲ့တယ်။
(၃၁) နှစ်အရွယ်မှာ ဥပဒေပညာကို ကိုယ်တိုင်လေ့လာသင်ယူပြီး သူငယ်ချင်းရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ ရှေ့နေအလုပ်ကို သူလုပ်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အမှုတစ်ခုနဲ့ တရားရုံးမှာ အမှုအပ်သူနဲ့ ထိုးကြိတ်ခဲ့ကြတယ်။
(၃၅) နှစ်အရွယ်မှာကံမကောင်းခြင်းက သူ့ဆီကျရောက်ခဲ့ပြန်တယ်။ ကားမောင်းပြီး တံတားတစ်စင်းပေါ်ဖြတ်တဲ့အချိန် တံတားကျိုးကျပြီး ကားရောလူပါ ချောက်ထဲကျသွားခဲ့တယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးဒဏ်ရာအထပ်ထပ်နဲ့ ကားဘီးအရောင်းမြှင့်တင်တဲ့အလုပ်ကို သူဆက်မလုပ်နိုင်ခဲ့တော့ဘူး။
(၄ဝ) နှစ်အရွယ်မှာ မြို့တစ်မြို့မှာ ဓါတ်ဆီဆိုင်တစ်ဆိုင်သူဖွင့်ခဲ့တယ်။ ဆိုင်းဘုတ်တင်ချိန်မှာ စီးပွားဖက်နဲ့ ရန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် အမှုဖြစ်ပွားခဲ့ရတယ်။
(၄၇) နှစ်အရွယ်မှာ ဒုတိယအိမ်ထောင်နဲ့ သူကွာရှင်းခဲ့တယ်။ သားသမီး သုံးဦး ကျန်ခဲ့တယ်။
(၆၁) နှစ်အရွယ်မှာ အထက်လွှတ်တော်အမတ် ဝင်အရွေးခံခဲ့ပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။
(၆၅) နှစ်အရွယ်မှာ လမ်းချဲ့တဲ့အစိုးရကြောင့် နာမည်ထွက်စပြုနေတဲ့ Fast food သူ့စားသောက်ဆိုင်လေး ဖျက်သိမ်းခံလိုက်ရတယ်။ ရှိစုမဲ့စုပစ္စည်းတွေကို တန်ဖိုးနည်းနည်းနဲ့ သူရောင်းချခဲ့ရတယ်။
(၇၅) နှစ်အရွယ်မှာ ကိုယ်တိုင်လုပ်နိုင်တဲ့အင်အားမရှိတာကြောင့် ကိုယ်စတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အမည်နဲ့ အတတ်ကိုလွှဲပြောင်းလိုက်တယ်။ ပိုင်ရှင်အသစ်က သူ့ကို စတော့ရှယ်ယာတစ်သောင်းပေးပြီး ဝယ်ယူတဲ့စရိတ်အချို့လုပ်ချင်ခဲ့ပေမယ့် သူငြင်းပယ်ခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်း ကုမ္ပဏီစတော့ဈေးတက်လာခဲ့ပြီး အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့သူ့အတွက် သူဌေးဖြစ်ဖို့ အခွင့်အလမ်းရခဲ့တယ်။
(၈၃) နှစ်အရွယ်မှာ Fast food နောက်ထပ် စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်ကို သူထပ်ဖွင့်လိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် ကုမ္ပဏီအမှတ်တံဆိပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမှုဖြစ်ခဲ့ရသေးတယ်။
ကဲ...ဘယ်လိုလဲ သင့်မှာရော "ဒူးမထောက် လက်မမြှောက်တဲ့စိတ်" ရှိရဲ့လား။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်မေးကြည့်စမ်းပါ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/30/2013 08:11:00 AM No comments:
မေမေနဲ့တကွ အမေများအားလုံးကို ဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/30/2013 08:10:00 AM No comments:
(၃) Beta blockers (ဘီတာ ဘလော့ကား) ဆေးက Adrenaline ကိုသက်ရောက်လို့ အထောက်အကူပေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ Lung disease အတုပ်ရောဂါ၊ Severe heart failure နှလုံးဆိုးဆိုးဝါးဝါးအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့တာနဲ့ Heart rate နှလုံးခုန်နှေးရောဂါရှိနေသူတွေကိုတော့ မပေးရဘူး။ ပေးရင် (အတက်ခ်) ရပြီးနောက်နေ့ကနေစပေးမယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/30/2013 08:05:00 AM No comments:
• မတည့်တာတွေ ကင်းရှင်းတဲ့ပါတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးပါ။ အိပ်ယာခင်း၊ ခေါးအုံးစွပ်အသစ်သုံးပါ။ လျှော်ဖွပ်ပါ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/30/2013 08:02:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/30/2013 08:01:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/30/2013 08:00:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/30/2013 07:50:00 AM No comments:
ကြောင့်သွေးဖိအားကို10 mmHg လျော့ကျစေတယ်လို့
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/30/2013 07:47:00 AM No comments:
"ကျွန်တော့်ရဲ့ ခံစားမှုတွေကို စကားလုံးတွေနဲ့ မဖော်ပြနိုင်ပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျွန်တော်က အပျော်ဆုံးသူ ဖြစ်သွားပါပြီ" ဟု တူရကီနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ ကိုဆင်၏ ဇာတိမြို့ဖြစ်သော မာဒင်၌ ပြုလုပ်ခဲ့သည့် မင်္ဂလာပွဲ အခမ်းအနားတွင် ကိုဆင်က ပြောကြားခဲ့သည်ဟု နိုင်ငံပိုင် အနာလိုတီယာ သတင်းအေဂျင်စီ၏ ၀က်ဘ်ဆိုက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဟာဆာကာ မြို့သူဖြစ်သော မာဗီဒီဗိုက "ဒီပျော်ရွှင်မှုဟာ တစ်သက်လုံး ဖြစ်ပါစေလို့ ကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်" ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ မင်္ဂလာပွဲ အခမ်းအနားတွင် ချည်အရှည်ရှိသော ရက်ထည်ဖြင့် ပြုလုပ်ရသည့် ရိုးရာဝတ်စုံအား ကိုစင်က ၀တ်ဆင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ တူရကီနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ လယ်သမား မိဘများမှ မွေးဖွားလာခဲ့သူ ကိုစင်သည် ဂင်းနစ်ကမ္ဘာ့မှတ်တမ်းများ စာအုပ်တွင် ကမ္ဘာပေါ်၌ အရပ်အရှည်ဆုံးဖြစ်ကြောင်း ၂၀၀၉ ခုနှစ်က သတ်မှတ်ခံခဲ့ရပြီးနောက် လူသိများလာ ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က ကိုဆင်၏ အရပ်အမြင့်မှာ ၂ ဒသမ ၄၇ မီတာသာ ရှိသေးသည်။
Gamma Knife ဟုခေါ်သည့် ခွဲစိတ်ပစ္စည်း အသုံးပြုပြီး ကြိမ်နှုန်းမြင့် ဓာတ်ရောင်ခြည်နှင့် ပစ်ခတ်ကာ ကိုစင်၏ အသားပိုအား အမေရိကန် ဆရာဝန်များက ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ် သြဂုတ်လ၌ ကုသပေးခဲ့သည်။
အရပ်ဆက်လက် ရှည်စေသည့် ဟိုမုန်းဖောက်ပြန်မှု ရောဂါ ကိုဆင့်တွင် မရှိတော့ကြောင်း ဆရာဝန်များက ၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကိုစင်သည် ချိုင်းထောက်အသုံးပြု၍ သွားလာနေရသည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/30/2013 07:27:00 AM No comments:
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကဒ်များ စမတ်ကဒ် အဖြစ်ပြောင်းမည်
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပြည်သူလူထုတွေ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြား (မှတ်ပုံတင်) တွေကို နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စမတ်ကတ်အဖြစ် ပြောင်းလဲပေးဖို့ စီစဉ်နေပြီလို့ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာနက ပြောပါတယ်။
လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ ထုတ်ပေးနေတဲ့ ပန်းရောင် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကပ်ပြာတွေဟာ အလွယ်တကူ ပျက်စီးနိုင်ပြီး ပုံစံတူ မှတ်ပုံတင်အတုတွေ ပြုလုပ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အတွက် နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ စမတ်ကတ်တွေအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးဖို့ စီစဉ်နေတာလို့ ဆိုပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လူဦးရေ သန်း ၆၀ လောက်ရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပေမယ့် လက်ရှိလူဦးရေ စာရင်းအတိ အကျ ကိုတော့ လာမယ့်နှစ် မတ်လမှာ ပြုလုပ်မယ့် ပြည်လုံးကျွတ်သန်းခေါင်စာ ရင်း ကောက်မှုအပြီးမှာမှ အတည်ပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/30/2013 07:24:00 AM No comments:
“နူတ်မူ”ဟူသည် နူတ်ဖြင့် ပြောဆိုပြုလုပ်ရသော ကိစ္စတည်း။ ဥပမာ - “ဟို အကောင်သတ်လိုက်၊ ဆွမ်းလောင်းလိုက်ပါ” စသည်ဖြင့် စေခိုင်းတိုက်တွန်းမူ၊ လိမ်လည်မူ၊ တရားဟောပြောမူ စသည်တည်း။
“စိတ်မူ”ဟူသည် ကိုယ်လည်းမလုပ်၊ နူတ်လည်း မပါ၊ စိတ်ထဲ၌သာ စဉ်းစားကြံစည် စိတ်ကူးမူတည်း။ ဥပမာ - “ဟိုလူ့ပစ္စည်းတွေဟာ ငါ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်လျှင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ”စသည်ဖြင့် မကောင်းကြံခြင်း၊ သူတစ်ပါးကို သနားကြင်နာခြင်း၊ ချမ်းသာစေလိုခြင်း။ ဘာဝနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း စီးဖြန်းပွားများခြင်း စသည်များတည်း။
ထို ကိုယ်မူ၊ နူတ်မူ၊ စိတ်မူများသည် စိတ်ကို မလူံ့ဆော်ရဘဲ ဘာသိဘာသာ ဖြစ်နေသည် မဟုတ်။ သူ့အသက်ကို သတ်ရာ၌ လက်က ဓားကိုကိုင်မိအောင်၊ ထိုဓားကို လူတစ်ယောက်အပေါ်သို့ ရောက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သော အမူသည် လက်သည်တရားကား ရှိရသေးသည်။ နူတ်ဖြင့်ပြောရာ၌လည်း စကားသံ တစ်လုံးချင်း ပေါ်လာအောင် ပြုလုပ်နိုင်သော အမူသည် လက်သည်တရားရှိသည်။
အိပ်ပျော်နေတုန်းအါ စိတ်တွေ များစွာဖြစ်နေသော်လည်း မည်သည့် စိတ်အမူမျှ မဖြစ်။ ထို့ကြောင့် ကိုယ်မူ၊ နူတ်မူ၊ စိတ်မူတို့၌ ပကတိစိတ်မှ ထူးခြား၍ သတ္တိထက်သော တရားတစ်မျိုး ရှိပေလိမ့်မည်။
လောက၌ အမူ တစ်စုံတစ်ရာပေါ်လျှင် လက်သည်ရှာရသကဲ့သို့ ထို့အတူ ဤ ကိုယ်မူ၊ နူတ်မူ၊ စိတ်မူများကို ဖြစ်ပေါ်အောင် ပြုလုပ်နိုင်သော အမူသည် လက်သည်တရားကိုိ ရှာသင့်ပေသည်။
"စေတနာသည် အမူသည် စေတနာသည် ကံ"
ထို ကိုယ်မူ၊ နူတ်မူ၊ စိတ်မူများ ဖြစ်အောင် လူံ့ဆော်ပေးသော တရားကား အတွင်းသန္တာန်၌ ဖြစ်နေသော စိတ်စေတသိက် အထဲမှာပင် ဗျာပါရ လွန်ကဲသော စေတနာ စေတသိက်တည်း။
ထို့ကြောင့် စေတနာ စေတသိက်သည် ထို ကိုယ်မူ၊ နူတ်မူ၊ စိတ်မူတို့ဖြစ်အောင် လူံ့ဆော်တတ်သော အမူသည် လက်သည် တရားတည်း။ ထိုအမူ “ကံ” များကို အထမြောက်အောင် ဖန်တီးတတ်သောကြောင့် (အကျိုးအမူ၏ ကံဟူသော နာမည်ကို အကြောင်းရင် စေတနာအပေါ်မှာ တင်စား၍) စေတနာ စေတသိက်ကိုပင် “ကံတရား”ဟု ခေါ်ရသည်။
မိမိစိတ်ဖြစ်ပုံကို မိမိကိုယ်တိုင် စဉ်းစား ကြည့်သောအခါ တချို့စိတ်၏ ဖြစ်ပုံသည် ထင်ရှား၏။ တချို့စိတ်၏ ဖြစ်ပုံကား မထင်ရှား။ အိပ်ပျော်နေသောအခါ၌ စိတ်အစဉ်သည် ဖြစ်မြဲဖြစ်နေ၏။ သို့သော် ဖြစ်ပုံကား မထင်ရှားချေ။
နိုးသောအခါမှာလည်း အမှတ်တမဲ့ မြင်ရ၊ ကြားရ၊ နံရ၊ ထိရသောအခါ စိတ်ဖြစ်ပုံ မထင်ရှား။
စိတ်ဖြင့် တွေးမိတွေးရာကို တွေး၍ ငေးမိငေးရာကို ငေးနေသောအခါလည်း စိတ်ဖြစ်ပုံ မထင်ရှား။
ထိုသို့ မထင်ရှားသောအခါ ကုသိုလ်ဇော အကုသိုလ်ဇော စိတ်စေတနာတွေ ဖြစ်ပေါ်နေသော်လည်း ထိုဇောစေတနာများကြောင့် မည်သည့် ကံတစ်ခုမျှ အထမမြောက်ဘဲ အမှတ်တမဲ့ မသိမသာဖြစ်သော ဇောစေတနာများလည်း တစ်နေ့အဖို့မှာ တော်တော်များစွာ ဖြစ်ကြသည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/29/2013 08:24:00 AM No comments:
-အမေရိကန်နိုင်ငံ National Sleep Foundation ရဲ့အဆိုအရနေ့လည် နေ့ခင်း15-20 မိနစ်အိပ်ခြင်းဟာစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေတယ်၊မှတ်ဥာဏ်ကိုပိုမိုထက်မြက်စေတယ်၊မောပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း ကိုပျောက်စေတယ်...လိုဆိုပါတယ်။
-ညဘက်အိပ်ရေးမ၀ခြင်းကိုနေ့လည်ပြန်လည်အစားထိုအိပ်ခြင်းက အိပ်ရေးဝမယ်လို သင်ထင်ရင်
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/29/2013 08:23:00 AM No comments:
သင့်ကျန်းမာရေးအတွက်...မစားသင့်သောအစာ(၇) မျို.ကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးမဂ္ဂဇင်းတစ်စောင်ဖြစ်တဲ့..SHAPE ကခုလိုကောက်နုတ်ဖော်ပြထားပါတယ်....။
(၁) Rice Cakes ( ဆန် (သို.) ကောက်ညှင်းခွက်ကြော်များ..)
ဒီအစားအစာကိုထုတ်လုပ်ရောင်းချသူများက..Diet Foods လို.အညွှန်းမှာဖော်ပြရောင်းချကြပေမယ့်..တကယ်တော့
(၂) Fat - Free Salad Dressing ( အသင့်စားအသုပ်အတွက်အချည်ရည်များ..)
(၃) Seitan ( အသားတုများ..)
ကမ္ဘာပေါ်မှာ..Vegetarian သမားများအတွက်အသားအစားထိုးပါ...။ဒီအစားအစာတွေမှာ..ပဲကိုအသုံးပြုထားတာမပာုတ်ပဲ...Wheat gluten ကိုသာအသုံးပြုထားတာကြောင့်..ပရိုတင်းဖြစ်ပေါ်မှုကိုကြီးမားစွာအပာန်.အတားဖြစ်စေပါတယ်...။
(၄) Shark (ငါးမန်းသား )
ငါးမန်းသားစားသုံးခြင်းပာာ..ငါးကြီးဆီလို.ခေါ်တဲ့ Omega-3 ဓါတ်ကိုအကျိုးပြုပေမယ့်...Mercury လို.ခေါ်တဲ့ပြဒါးဓါတ်(၃)
လမွန်တို.မှာပါဝင်တဲ့..အိုမီဂါ-3က..စိတ်အချရဆုံးဖြစ်စေမှာပါ..။
(၅) Refined Gains
စိတ်မကောင်းစရာကတော့...စူပါမတ်ကတ်ကြီးတွေမှာ..ရောင်းချတဲ့.. နံနက်ခင်းစာတွေ...pasta တွေ မှာ..ကာဗွန်ပာိုက်ဒရိတ်
(၆) Sugar Sweetened Beverages
Soft Drinks လို.ခေါ်တဲ့အချိုရည်တွေအများဆုံးပာာ...သကြား...အရောင်..အနံ.စတာတွေကိုပေါင်းစပ်ဖွဲ.စည်းထားတာကြောင့်..
Ref....For your Healthy ( Internet )
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/29/2013 08:15:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/29/2013 08:10:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/29/2013 08:05:00 AM No comments:
ခင်ပွန်းကြီး (၁၀)ပါး ဘုရားရှိခိုး APK
Download => ခင်ပွန်းကြီးရှိခိုး V.1.0 APK
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/29/2013 07:37:00 AM No comments:
ဖုန်းထဲမှာရှိထားသင့်တဲ့ မြန်မာ Ringtones 45 ခု
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/29/2013 07:34:00 AM No comments:
Google Maps မှ မြေပုံကို Download ချပြီး ကြည့်ခြင်း
TechSpace Journal powered by Computer Active Magazine
မြန်ဆန်တဲ့ အင်တာနက် ရှိတဲ့နေရာမျိုးမှာ Map တွေကို Offline အဖြစ် ကြည့်လို့ရအောင် Download လုပ်ယူထားခဲ့မယ်ဆိုရင် Data Connection မရတဲ့အချိန်မှာလည်း Maps တွေကိုကြည့်ပြီး အသုံးပြုနိုင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအတွက် မိမိ Download လုပ်ချင်တဲ့ Map Area ကိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာ "ok maps" ဆိုတဲ့ စာသားကို Search Bar မှာ ရိုက်ထည့်မယ်ဆိုရင် Pre-Loading Map % လို့ ဖော်ပြမှာ ဖြစ်ပြီး 100% ပြည့်သွားရင်တော့ "The On Screen map area has been cached" လို့ ဖော်ပြကာ Download လုပ်ပြီးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/29/2013 07:25:00 AM No comments:
ရွှေစည်းခုံ စေတီတော် ( ပုဂံ ) သမိုင်း
ရွှေစည်းခုံ စေတီတော် သည် ညောင်ဦးမြို့ မှ အနောက် တောင် ယွန်းယွန်း၊ မိုင်ဝက် ခန့် ဧရာဝတီ မြစ် ကမ်းနဖူးရှိ ပေ ( ၇၅၀ )ကျော်ခန့် ရှည်လျား ကျယ်ဝန်း သော မဟာရံ တံတိုင်းကြီး နှင့် ဉာဏ်တော်ပေ ( ၁၆၀ )၊ ဖိနပ်တော် အကျယ်ပေ ( ၁၆၀ )ပမာဏ ရှိကာ ရွှေရောင် ၀င်းလျက် တင့်တယ် ကြည်ညို ဖွယ် တည်ရှိ လေသည်။ ပုဂံမင်း နှစ်ပါး တည်ခဲ့ ပြီး၊ သိမှတ်ဖွယ် ရာ၊ အံ့ဘွယ်များ ကြောင့် အထူး ကျော်ကြား သည်။
ပုဂံ ပြည့်ရှင် သီရိ အနုရုဒ္ဓ ဒေ၀ ခေါ် အနော်ရထာ မင်း လက်ထက်တွင် သီဟိုဠ်ကျွန်း ၏ ဘုရင် ပထမ ၀ိဇယဗာဟု မင်းကြီး ၏ အကူအညီ တောင်းခြင်း ကြောင့် ရဟန်း သံဃာတော်များ၊ ပိဋကတ် သုံးပုံ ကျမ်းစာ များ နှင့် ဆင်ဖြူတော် တစ်စီး တို့ကို အကူအညီ ပေးခဲ့ သည်။ ပထမ ၀ိဇယဗာဟု မင်း ကလည်း အနော်ရထာ မင်း ၏ ကျေးဇူး ကို တုံ့ပြန်သော အားဖြင့် မြတ်စွာ ဘုရား ၏ စွယ်တော် ပွား ကို အနော်ရထာ မင်း ထံ ဓမ္မ လက်ဆောင် ပြန်လည် ပေးပို့ ခဲ့သည်။ အနော်ရထာ မင်းကြီး သည် စွယ်တော်မြတ် ကို နန်းတော် ရှေ့  ရတနာ ပြဿာဒ် တွင် ကိန်းဝပ် စေပြီး ပူဇော် ၀တ်ပြု ခဲ့သည်။ ထိုအခါ မင်းဆရာ ဖြစ်သော ရှင်အရဟံ မထေရ် က သတ္တ၀ါ အားလုံး ကိုးကွယ် နိုင်စေရန် စေတီ တည်ပါ ဟု မင်းကြီး အား အကြံဥာဏ် ပေးခဲ့ သည်။ အနော်ရထာ မင်း လည်း ရှင်အရဟံ မထေရ်၏ အကြံဥာဏ် မှာ အလွန် လှော်ကန် သင့်မြတ် သည့် အတွက် စေတီ တည် ၍ တည်ထား ကိုးကွယ် ရန် ဆောင်ရွက် ခဲ့ သည်။
မင်းကြီး သည် စွယ်တော် ကိန်းဝပ် လိုသော အရပ်တွင် ဆင်ဖြူတော် ရပ်စေ သတည်း ဟု အဓိဌာန် ၍ ဆင်ဖြူတော် ၏ ကိုယ် ပေါ်တွင် စွယ်တော် ကြုတ်တင် ၍ လွှတ်လိုက် လေသည်။ ဆင်ဖြူတော် သည် ပုဂံ ၏ အရှေ့ မြောက် အရပ် ( ဇေယျ ဘုံ ဟု ခေါ်တွင်သော အောင်မြေ အရပ်၌ ) သဲစည်းခုံ တွင် ၀ပ်လေ သည်။ ဆင်ဖြူတော် ၀ပ်ရာ သဲစည်းခုံ တွင် စွယ်တော် မြတ် ကို ဌာပနာ ထားပြီ စေတီ တည်တော်မူ သည်။ ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၄၂၁ - ခု၊ တပို့တွဲ လဆန်း ( ၁၀ ) ရက်၊ ကြာသပတေး နေ့ တွင် စတင် တည်ဆောက် ခဲ့ပြီး တရုတ် ပြည်မှ ရသော မြဆင်းတု တစ်ဆူ နှင့် သရေ ခေတ္တရာ ပြည်ရှိ ဒွတ္တပေါင် မင်းကြီး တည်ထား ကိုးကွယ် ခဲ့သော နဖူး သင်းကျစ်တော် တစ်ဆူ ကို လည်း ဌာပနာ ထားသည်။ ဘုရား တည်နေတုန်း ပစ္စယာ ၃ ဆင့် အရောက် တွင်ပင် အနော်ရထာ မင်း နတ်ရွာစံ( သေဆုံး ) ခဲ့သည်။ အနော်ရထာ မင်း နတ်ရွာစံ ပြီးနောက် ကျန်စစ်သားမင်း က ကောဇာသက္ကရာဇ် ၄၅၁ - ခု၊ တန်ဆောင်မုန်း လဆန်း ( ၁၃ ) ရက်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ တွင် ဆက်လက် တည်ဆောက် ခဲ့ရာ ကောဇာ သက္ကရာဇ် ၄၅၂ - ခု၊ ကဆုန် လပြည့်နေ့ တွင် ပြီးမြောက် အောင်မြင် ခဲ့သည်။ စေတီတော်ကြီး တည်ဆောက် ခဲ့သည့် နှစ်မှ ပြီးစီးသည့် နှစ် အထိ နှစ်ပေါင်း ၃၁ - နှစ် ကြာ၏။
ရွှေစည်းခုံ စေတီတော် ကြီး သည် မူလ က ကျောက်ချပ် များ ဖြင့် တည်ဆောက် ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် ယနေ့ အခါ ရွှေ အထပ်ထပ် ချသော ကြောင့် မူလ ကျောက်ပြားများ ပျောက် နေပြီး ရွှေတောင် ကြီး သဖွယ် ဖြစ်နေ သည်။ ပစ္စယာ အဆင့် ၃ ဆင့်ရှိ သည် သုံးဆင့် အပေါ်မှ ရှစ်ထောင့် ကြာဝန်း၊ ကြေးဝိုင်း၊ ကြာမှောက် ကြာလှန် နှင့် ခါးပတ် ရှိသည်။ ယင်း အထက် တွင် ခေါင်းလောင်း ပုံ၊ ခေါင်းလောင်း ပုံ ၏ အထက် တွင် သပိတ် မှောက်နှင့် ဖောင်းရစ် ရှိသည်။ ဖောင်းရစ် အထက် ကြာစိတ်၊ ကြာမှောက်၊ ကြာပျံ နှင့် ထီးတော် ရှိသည်။ ပစ္စယာ အဆင့်မှ ထီးတော် အထိ ပေ ၁၅၀ မြင့် သည်။ ပစ္စယာ အဆင့်ဆင့် တွင် ငါးရာ့ ငါးဆယ် ဇာတ်တော် ရုပ်ကြွ အုပ်ချပ် များ ရှိသည်။
စေတီ၏ လေးဘက် လေးတန် ၌ အုတ် ဂန္ဓကုဋီ လေးဆောင် ရှိသည်။ ယင်း ဂန္ဓ ကုဋီ တိုက်များ အတွင်း ၌ အလွန် လက်ရာ မြောက်သော မတ်ရပ် ကြေးဆင်းတု တစ်ဆူစီ ရှိသည်။ ဥာဏ်တော် ၁၂ ပေ မြင့် သည့် ပုဂံခေတ် လက်ရာ ဖြစ်သည်။ မူလ က ဂန္ဓကုဋီ တိုက် တံခါး များ ရှိသော်လည်း ယခု အခါ ၁ ခုသာ ကျန်တော့ သည်။ ရင်ပြင်တော် အနောက် ဘက် ပိုင်း တွင် နတ်ရုပ်တု၊ ဘိုးတော် ရုပ်တု၊ သိကြား ရုပ်တု စသည်များ လည်း သူ့ အဆောင် နှင့် သူ ရှိသည်။ ရင်ပြင်တော် အရှေ့ မြောက်ထောင့် တွင် ကျောက်စာရုံ ရှိသည်။ ကျောက်စာရုံ ထဲတွင် ခေတ် အဆက်ဆက် မှ ရေးထိုး ထားခဲ့သည့် ကျောက်စာ များ ထဲမှ ကျောက်စာ ၆ ချပ် ကို သိမ်းဆည်း ထားသည်။ ကျန်းစစ်သား မင်းကြီး ၏ ကျောက်စာ တိုင်ကြီး ၂ တိုင် သည် အရှေ့ ဘက် မုခ် တွင် ရှိသည်။ ရှေးမွန် ဘာသာ ဖြင့် ရေးထိုး ထားသည်။ ရွှေစည်းခုံ စေတီ ရင်ပြင် ရှိ အုတ်ဇရပ် အတွင်း ရှိ ပုဂံခေတ် က ထုလုပ် ခဲ့သည့် ဗုဒ္ဓ ခြေတော်ရာ၊ သစ်သား ပန်းပု သိကြား ရုပ် နှင့် သစ်သား ပန်းပု တံခါးရွက် တို့ကို လေ့လာ နိုင်သည်။ ရွှေစည်းခုံ စေတီ ပန္နက် ရိုက်ရာ ၌ အခြေပြု သည့် ပန္နက် သဲဂူ၊ အုတ်ဇလား ဂူ တို့ လည်း ရှိသည်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/28/2013 08:16:00 AM No comments:
ပန်းပွင့် အလွန်သေးငယ်သည်။ အဖို ၊ အမ သီးသန့် ရှိသည် ။ ပန်းခိုင် များသည် အရွက်နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင်ထွက်သည်။ အဖိုပန်းခိုင်သည် ပို၍ သေးသည် ။
၁။ ကွမ်းရွက် ညှစ်ရည်ကို ပျားရည်နှင့် တိုက်က ကလေးများ လေပွခြင်း ၊ အစာမကြေခြင်း ၊ ၀မ်းသွားခြင်း ၊ ဖျားနာခြင်းများ ပျောက်၏ ။
၂။ ကွမ်းရွက် ညှစ်ရည်ကို နွားနို့နှင့် သောက်က မီးယပ်ကြောင့် ဖြစ်သော စိတ္တဇ ရောဂါ ပျောက်၏ ။
၃။ ကွမ်းရွက် ညှစ်ရည်တွင် ချင်းပြုတ်ရည် နှင့် သိန္ဓောဆား အနည်းငယ်ထည့်သောက်က ပန်းနာရင်ကျပ် ၊ ရင်အောင့် ရင်ကယ် ၊ ကြက်ညှာချောင်းဆိုးများ ပျောက်၏ ။
၄။ ကွမ်းရွက်ညှစ်ရည်အား မျက်စဉ်းခတ်ပေးခြင်းဖြင့် ကြက်မျက်သင့်နာ ၊ မျက်စိနာ ၊ မျက်စိရောင်ခြင်း ၊ ကိုက်ခြင်း စသည့်မျက်စိနှင့်ဆိုင်သော ရောဂါများ ပျောက်ကင်း၏ ။
၅။ကွမ်းရွက်ကို နနွင်း နှင့် ကျိုပြီး ဆားအနည်းငယ် ခတ်သောက် က ဖျားနာရောဂါ ပျောက်၏ ။
၆။ ကွမ်းရွက်ကို မီးကင်၍ ကလေးများငယ်ထိပ်တွင် အုန်းသီး နှင့်ဆွတ်ပြီး ကပ်ပေးထားပါက နှာစေးရောဂါ ပျောက်ကင်း၏ ။
၇။ ကွမ်းရွက်ကို ထန်းလျက် ၊ ချင်း ၊ ဆားထည့်ပြုတ်သောက်သော် အပူလွန်၍ ဖျားသော ရောဂါပျောက်၏ ။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/28/2013 08:04:00 AM No comments:
အရက်သောက် ခြင်း က စိတ်ဓာတ် ပိုမို ကျဆင်းစေ
အရက် သောက် ရင် စိတ် သောက ဝေဒနာများ ပျောက်ကင်း သွားတယ် လို့ ယူဆချက် များ က မှားယွင်း တယ် လို့ အမေရိကန် မှ ဆေးသိပ္ပံ ပညာရှင် များ က သက်သေပြ လိုက်ပြီ ဖြစ် ပါတယ်။
ယင်းတွေ့ရှိ ချက် က အရက်နှင့် ဆက်စပ် ယမကာ သောက်သုံး ခြင်းက စိတ်ဓာတ် ကျဆင်းမှု ကို မပြေလျော့ စေတဲ့ အပြင် စိတ်ကျ ရောဂါဖြစ်ဖို့ အကြီး မားဆုံး တွန်းအား တစ်ခု ဖြစ်လာ နိုင်ကြောင်း သိရပါတယ်။ Depression ဖြေဖျောက် ဖို့ဆိုပြီး လူ အများစု အရက် ကို ထွက်ပေါက် တစ်ခု အဖြစ် သတ်မှတ် ပြီး သောက်သုံး ပါတယ်။ ယခု တော့ အရက် ဟာ အခြား ကျန်းမာရေး ကို ထိခိုက် စေတဲ့ အပြင် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ကိုပါ ထိခိုက် စေတယ် လို့ သက်သေ ပြသ ထား လိုက်ခြင်း ဖြစ် ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အခြား သော မှန်ကန် တဲ့ စိတ်ထွက်ပေါက် ရှာရန် နည်းလမ်း များ ကို အသုံး ပြုဖို့ တိုက်တွန်း ထားကြောင်း သိရ ပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/28/2013 07:53:00 AM No comments:
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/28/2013 07:51:00 AM No comments:
အထက်ပါ ၇ ချက်ကို ပုံမှန်ပြုလုပ် ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင် မလုပ်သူများထက် စာရင် အသက်ပိုရှည်ပြီး ကျန်းမာရေး ကောင်းကောင်းနဲ့ နေထိုင်ရ တာ ကို ဆေးပညာရှင်များက လေ့လာတွေ့ရှိထားခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/28/2013 07:48:00 AM No comments:
Mozilla Firefox မှ ပန်ဒါနီ
Mozilla Firefox ဆိုရင် အရင်က အများစု သိထားတာဟာ မြေခွေး သို့မဟုတ် မီးလောင်နေသော မြေခွေးလို့ပဲ သိထားကြပါတယ်။ အမှန်တော့ သူက Red Panda ဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာလို ရှင်းရှင်းခေါ်တော့ ပန်ဒါနီလို့အမည်ရပြီး သူ့ရဲ့  အနီကွက် အရောင် အသွေးများကြောင့် Firefox လို့လည်း အင်္ဂလိပ်လို အမည်ပေး ပါတယ်။ နေထိုင်ကျက်စားနေတဲ့ ဒေသကလည်း သိပ်အဝေးကြီး မဟုတ်ပါဘူး ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ တရုတ်ပြည်နယ် သစ်မှာ ဖြစ်ပြီး မြန်မာမြေပိုင် နက် ထဲမှာလည်း အကောင်ရေ ထောင်ကျော် ကျက်စားနေ ထိုင်နေသေး ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ တရုတ်ပြည်မှာတော့ အများကြီးပါ။ သို့ပေမယ့် ရှားပါး တိရစ္ဆာန် စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်နေပါတယ်။
Mozilla အဖွဲ့အနေနဲ့ ၎င်းတို့ရဲ့  အများနဲ့မတူ တမူထူးခြားတဲ့ Web Browser ကို တူမတူတဲ့ အမည်တစ်ခုရအောင် Firefox ကို ရွေးခဲ့ခြင်းပါ။ ဒါကို မသိတဲ့ သူများက မီးလောင်နေသော မြေခွေးလို့ပဲ ဘာသာပြန်ကြ ပါတယ်။ အမှန်တော့ သူက Red Panda ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 10/28/2013 07:37:00 AM No comments:
ရှုံးနိမ့်မှုပေါင်း (၁ဝဝ၉) ကြိမ်ကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီး ...
နိုင်ငံသားစိစစ်ရေး ကဒ်များ စမတ်ကဒ် အဖြစ်ပြောင်းမည်...
Google Maps မှ မြေပုံကို Download ချပြီး ကြည့်ခြင်...
ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာ ဖြစ်စေရန် လှုံ့ဆော်နိုင်သော အရာမျာ...
ကျန်းမာအောင်နေနည်း (Health tips to keep you health...
အမေရိကန်မှ ကြက်မြို့ တော်
ငယ်စဉ်က အရိုက်ခံရသည့် ကလေးများ သာမန်ထက် ရန်လိုလေ့ရ...
အူမ - မတောင့်ပေမယ့် သီလစောင့်ပါ
ရွှေထွက်တဲ့ သစ်ပင် (Gold from Trees)
ကျွန်တော်က မိုးစက်ဝိုင်ကို အားပေးတဲ့အချက်ကတော့
မိဘကိုရိုသေ အလုပ်အပေါ်မှာရိုးသားတာတွေက အောင်မြင်ဖို...
အားဆေး အကြောင်း သိကောင်းစရာ လေးများ
Hiccups ကျို့ထိုး သက်သာနည်းများ
အာကာသထဲမှာ လိင်ဆက်ဆံခြင်း ဖြစ်နိုင်/မဖြစ်နိုင်
အောင် မြင် မှု ရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်
Sim card lock ကျ ရသောအကြောင်း
Samsung ဖုန်း မဟန်းအောင် သုံးမယ်
ကိုယ်ဝန် ပျက်တာ ဘာကြောင့်ပါလဲ
နာဂပူမြို့ လူတစ်သိန်းကျော် ဗုဒ္ဓဘာသာ ခံယူပွဲ ကျင်းပ...
ကာမေသုမိစ္ဆာစာရကံနှင့် ပတ်သတ်၍ အကျယ်တဝင့် ရှင်းလင်း...
ဗုဒ္ဓဘာသာတိုင်း သိသင့်သော ဘုရားရှိခိုး
စာရေးဆရာ ကိုအောင်ဆန်း အပိုင်း (၅)
"မြင်းမိုရ်တောင်ဦးကို ညွတ်နူးတဲ့ ၀ါကျွတ်အစဉ်အလာ
တွဲဖက်၍ မစားသင့်သော အစားအစာများ
သတိ ရှိပါ ၊ စပ်စု လို စိတ် လျှော့ ပါ